Ibugharị n’elu tebụl bed F-32
Ibugharị F-32 nwere ike ibugharị n’elu tebụl akwa F-32 Size: L795 * W400 * H700 ~ 960mm isi: 1. epoxy kpuchie nchara na osisi n’elu osisi 2. a ga-emegharị elu site na gas-mmiri site na 700 ruo 960mm 3. base ya na bra.rk.50mm, abuo n’ime ha nwere breek 4. Ibelata ngwongwo na-echekwa ibu.
Bugharịa n’elu tebụl bed F-32-2
F-32-2 okpokoro dị elu nke okpokoro dị elu, nke na-eyi ma na-egbochi mmanụ; Aluminium alloy kọlụm weliri usoro. Mara mma, kwụ chịm ma sie ike; Ntughari mgbanwe ihu igwe dị elu, dị mma maka iri nri & agụ; Igwe ihe nkedo nke ogidi 50mm nke di nfe, na agbanwe agbanwe; Ebere dị ala: 825-1115mm; Ibu ọrụ: 20kgs; Ngo desktọpụ: 880mm × 425mm;
Vablenwere ike ibugharị n’elu tebụl bed F-32 (A1)
F-32 (A1) PE okpokoro dị n’elu, nke na-eyi ihe na-egbochi mmanụ; Aluminium alloy kọlụm weliri usoro. Mara mma, kwụ chịm ma sie ike; Igwe ihe nkedo nke ogidi 40mm nke di nfe, na-agbanwe agbanwe; Ebere dị ala: 740-1115mm; Ibu ọrụ: 30kgs; Oke tebụl dị oke elu: 920mm × 400mm
Ibugharị n’elu tebụl bed F-33
F-33 ​​Movable n’elu tebụl akwa F-33 nha: L770 * W380 * H750 ~ 1010mm isi: 1. epoxy kpuchie nchara, ya na ọdụ ụgbọ elu nke ABS 2. igbe elu gas nwere ike idozi ya site na 750 ruo1010mm; 3. okpu jiri dia.50mm castors, abụọ n'ime ha nwere breek 4. Mbufe na -eme ka oghoo ebupute ahihia.
Bugharịa n’elu tebụl bed F-32-1
Ogo nke F-32-1: L800 * W400 * H660 ~ 960mm isi: 1. ironxy coated steel, with the Phenolic top board 2. Enwere ike idozi elu site na gas site na 660 ruo 960mm; 3. okpu jiri dia.63mm castors, abụọ n'ime ha nwere breek 4. Mbuo ahia ohuru na - echekwa ulo.